Igama lesiqhelo: I-toremifene (tor EM i feen)
Igama lebrand: UFareston
Iifom zedosi: Ithebhulethi yomlomo (60 mg)
Udidi lweziyobisi: IiHormone / i-antineoplastics, Iimodyuli ezikhethiweyo ze-estrogen receptor
NguMedical; Uhlaziywe ngu-Varixcare.cz ngoJulayi 15, 2020. Ibhalwe nguCerner Multum.
I-Toremifene isetyenziswe kubafazi be-postmenopausal ukunyanga umdlavuza webele we-metastatic (umhlaza osasazeke kwamanye amalungu omzimba). Ugqirha wakho unokulivavanya ithumba lakho ngaphambi kokumisela i-toremifene.
I-Toremifene inokusetyenziselwa iinjongo ezingadweliswanga kwesi sikhokelo sonyango.
Akufanele usebenzise toremifene ukuba unembali ye I-QT syndrome ende , okanye amanqanaba asezantsi e-potassium okanye yemagniziyam egazini lakho.
I-Toremifene inokubangela isifo sentliziyo esisongela ubomi. Yeka ukusebenzisa i-toremifene kwaye ubize ugqirha wakho kwangoko ukuba unayo : ukukhawuleza okanye ukubetha kwentliziyo, ukubetha esifubeni, ukuphefumla kancinci, kwaye ngequbuliso isiyezi .
Akufanele usebenzise i-toremifene ukuba u-aleji kuyo, okanye ukuba une:
I-QT syndrome ende; okanye
ukungalingani okungalawulwayo kwe-electrolyte (amanqanaba asezantsi e-potassium okanye i-magnesium egazini lakho).
amanqanaba aphezulu e-calcium egazini lakho ( hypercalcemia );
i-endometrial hyperplasia (ukugqithisa kweeseli ezingene kwisibeleko);
I-QT syndrome ende (kuwe okanye kwilungu losapho);
umhlaza wamathambo; okanye
I-Toremifene inokunyusa umngcipheko wokuphuhlisa imeko enokukhokelela kumhlaza wesibeleko. Thetha nogqirha wakho malunga nomngcipheko wakho. Xela nakuphi na ukopha okungaqhelekanga kwilungu lobufazi kwangoko.
I-toremifene isetyenziselwa kuphela abasetyhini abangasakwaziyo ukukhulelwa. I-Toremifene inokulimaza umntwana ongakazalwa. Sukuyisebenzisa ukuba ukhulelwe. Sebenzisa ulawulo lokuzalwa olusebenzayo ukuba awudluli ukuyeka ukuya exesheni . Tshela ugqirha wakho ukuba ucinga ukuba unokukhulelwa.
I-Toremifene inokwenza ulawulo lokuzalwa kwehomoni lungasebenzi kakuhle, kubandakanya iipilisi zokulawula inzala , inaliti, izinto ezifakwayo, izikhumba, kunye nemisesane yelungu lobufazi. Ukuthintela ukukhulelwa ngelixa usebenzisa i-toremifene, sebenzisa indlela yothintelo lolawulo lokuzalwa: ikhondom, uvalo , ikepusi yomlomo wesibeleko, okanye isiponji sokucwangcisa.
Akufanele uncelise ngelixa usebenzisa i-toremifene.
Ndingayithatha kanjani i-toremifene?
Ugqirha wakho angenza uvavanyo lwe-pelvic ukuqinisekisa ukuba awunayo imiqathango enokukuthintela ekusebenziseni ngokukhuselekileyo i-toremifene.
Thatha iyeza ngexesha elifanayo yonke imihla, kunye okanye ngaphandle kokutya.
Gcina kubushushu begumbi kude nobushushu, ubushushu, kunye nokukhanya.
Thatha iyeza ngokukhawuleza, kodwa weqe idosi ephosiweyo ukuba sele ilixa ledosi yakho elandelayo. Musa ukuthatha amanani amabini ngexesha elinye.
Iimpawu zokudlula ngaphezulu zinokubandakanya intloko ebuhlungu , isiyezi kunye isicaphucaphu .
Yintoni endifanele ukuyiphepha ngelixa ndithatha i-toremifene?
Isiqhamo seediliya kunye Ijusi yeediliya inokusebenzisana ne-toremifene kwaye ikhokelele kwiziphumo ebezingalindelekanga ezingafunekiyo. Kunqande ukusetyenziswa kwemveliso yeediliya ngelixa uthatha i-toremifene.
Buza ugqirha wakho okanye usokhemesti ngaphambi kokuba uthathe amayeza iivithamini , okanye iimveliso zemifuno . Gwema ukuthatha isongezelelo semifuno esinezixhobo Wort yaseSt .
Iziphumo ebezingalindelekanga zeToremifene
I-Toremifene inokubangela isifo sentliziyo esisongela ubomi. Yeka ukusebenzisa i-toremifene kwaye ubize ugqirha wakho kwangoko ukuba unayo :
ukukhawuleza okanye ukubetha kwentliziyo;
ukubetha esifubeni sakho;
isiyezi ngesiquphe (ngathi ungaphuma);
iintlungu zangasese, ezingaqhelekanga ukopha kwilungu lobufazi ;
ukuya ukubetha kwentliziyo kancinci , ukubetha kwentliziyo ebuthathaka, ukuphelelwa ngamandla, ukuphefumla kade (ukuphefumla kunokuyeka);
ukuhlaselwa yintliziyo iimpawu - iintlungu zesifuba okanye uxinzelelo, iintlungu zisasazeka emhlathini okanye egxalabeni, isicaphucaphu, ukubila;
amanqanaba aphezulu e-calcium - ukudideka, ukudinwa, isicaphucaphu, ukugabha Ukuphelelwa ngumdla wokutya, ukuqhina , ukwanda kokoma okanye ukuchama, ukuhla ukusinda ;
iingxaki zesibindi-ukulahleka kwesidlo, iintlungu zesisu (kwicala lasekunene), umchamo omnyama, izitulo ezinombala wodongwe, inyongo (ngatyheli kolusu okanye kwamehlo); okanye
imiqondiso yegazi - ngequbuliso ukuba ndindisholo okanye ubuthathaka (ngakumbi kwelinye icala lomzimba), intloko ebukhali, intetho egudileyo, iingxaki ngombono okanye ukulinganisela, iintlungu zesifuba, ukuvutha, ukhohlela igazi .
ukubila, kushushu ;
ukukhutshwa kwilungu lobufazi .
Ulwazi lwedosi yeToremifene
I-Dose yesiqhelo yabantu abadala yomhlaza wamabele:
I-60 mg ngomlomo kanye yonke imihla
Ixesha lonyango: Unyango luqhubeka ngokubanzi de kube kuqatshelwe ukuvela kwesifo.
Sebenzisa: Unyango lomhlaza webele we-metastatic kuma-postmenopausal abasetyhini abane-estrogen-receptor elungileyo okanye engaziwayo amathumba.
Zeziphi ezinye iziyobisi ezichaphazela ukuphindaphinda?
Ngamanye amaxesha akukhuselekanga ukusebenzisa amayeza athile ngaxeshanye. Amanye amachiza anokuchaphazela amanqanaba akho egazi ngamanye amachiza owathathayo, anokunyusa iziphumo ebezingalindelekanga okanye enze amayeza angasebenzi kakuhle.
I-Toremifene inokubangela ingxaki enkulu yentliziyo. Umngcipheko wakho unokuphakama ukuba usebenzisa amanye amayeza usulelo, umbefu , iingxaki zentliziyo, uxinzelelo lwegazi, uxinzelelo, ukugula ngengqondo, umhlaza, isifo seengcongconi, okanye Intsholongwane kaGawulayo .
Amachiza amaninzi anokuchaphazela ukuphindaphinda. Oku kubandakanya amayeza amayeza kunye nalawo e-counter, iivithamini , kunye iimveliso zemifuno . Ayisilo lonke unxibelelwano olunokwenzeka oludweliswe apha. Tshela ugqirha wakho malunga nawo onke amayeza akhoyo kunye nalo naliphi na iyeza oqala okanye uyeke ukulisebenzisa.
Ngaba iToremifene iyanxibelelana nezinye iziyobisi?
hydrocodone bit isiraphu yasekhaya
I-tritop mafutha enja
Iziphumo ebezingalindelekanga zescopalamine
Iindleko ze-adderall ngaphandle kwe-inshurensi
Ukhula luhlala kwinkqubo